Notanterahana nandritra ny hetsika “Vitrine du Vakinankaratra” farany teo ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin’ny minisiteran’ny angovo sy ny rano ary ny akoran’afo sy ity orinasa ity.
Hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana ireo trano mora ho an’ny ao Toamasina, hoy ny filoha Rajoelina omaly. Nijery ifotony ny toerana hanatanterahana izany izay eny Ambohijafy-Toamasina izy sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny omaly. Hanomboka ny fanorenana trano 8 volana aty aorian’ny nahazoana ny fitondrana. Mbola ankamantatra kosa ny fahavitany sy ny fomba hizarana azy.
MANOMBOKA TSY MINO INTSONY
Manomboka efa tsy mino an-dRajoelina intsony i Toamasina. Be loatra ny fampanantenana nataony tamin'io tanàna io kanefa zara raha nisy nanomboka ny asa, nijanona teo amin'ny fametrahana vato fototra ny ankamaroany. Raha nitsidika ny toerana lazainy fa hametrahana ny building ny filoha dia nihomehezan'ny olona fotsiny sisa tany anaty tambajotra sosialy. Tsy ho tontosa mihitsy izany Toamasina ho Miami izany. Takonana amin'ny fety fotsiny ny tsy fahavitan-javatra, izay hatrany no fika.
FIFANARAHANA EFA TAMIN”NY 2016
Fifanaraham-piaraha-miasa izay efa nosoniavina tamin'ny taona 2016 ny fanamboarana ny lakandranon'i Pangalana. Diso tanteraka ny filazana fa miasa avy hatrany ny fitondrana satria raha ny marina dia fitohizam-pahefana no misy ary ezaky ny fitondrana teo aloha no ialokalofan'ny fitondrana tia sehoseho ankehitriny. Toa izany koa ny fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra izay efa voasonia tany aloha ary tontosaina fotsiny ankehitriny.
Mirongatra indray ny aretin-kibo mpahazo ny zazakely. Feno izany eny amin'ny hopitaly mpitsabo ny reny sy ny zaza. Raha ny fanazavana azo dia ny fiovàn'ny toetry ny andro izay mizotra any amin'ny lohataona ankehitriny no mahatonga izany. Manodidina ny zaza fito isan'andro no miditra hopitaly noho io aretin-kibo io. Sady tsy mety mihinan-kanina ireo zaza no mivalana sy mandoa, izay no fisehon'ny aretina. Betsaka no atao "sondes" mba hampidirana sakafo, vokatr'izany.
MAMETRAKA FEPETRA NY RMDM
Na ireo mpikambana tao amin'ny rodoben'ny mpanohitra (Rmdm) aza tsy nahalala hoe ilay sekretera jeneralin'ny kaominina no atolotry ny Tim ho kandida ben'ny tanana hoy izy ireo. Mametraka fepetra arak'izany ny Rmdm fa raha toa ka manantanteraka ny fanorenana ifotony ity kandida ity izay vao hanohana azy izy ireo. Raha tsy izany dia tsy hanohana an'ilay kandida Tim ny rmdm na dia efa samy ao amin'ny fanoherana aza.
Paik'ady politikan'ny filoha Ravalomanana mihitsy no tsy nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna na dia efa niandry mafy aza ireo mpanara-dia azy. Manomboka mizarazara anefa ny hevitr'ireo mpiara dia aminy izay gaga tamin'ilay olona narotsaka kandida. Asa toy ny ahoana no handaminany sain'ireo mpiara-dia aminy amin'izao izay efa manomboka mivaky noho iny fanapahan-kevitra iny.
AMBANY TETEZANA MANGARIVOTRA
Lasa toerana famoizam-po ho an'ny olona sahiràna ao ambany tetezana ao Mangarivotra-Toamasina. Mitovy tanteraka amin'ny tetezan'i Tanjombato eto an-drenivohitra izany raha jerena amin'io lafiny io. Omaly maraina dia nisy rangahy izay hita faty niantona tamin'ny tady ny tenany. Teo am-povoan'ny fako izy no nisy nahita ary efa tsy nisy aina intsony. Matetika mitranga ny toa izao raha araka ny fanazavan'ny mponina eo an-toerana.
MIANKINA AMIN’NY HCC
Miankina amin'ny Hcc ny momba an'ireo kaominina roa ao Ambatondrazaka izay tsy manana kandida lisitra ho mpanolon-tsaina. Raha ny tombana, mety hatao andro hafa ny fifidianana mpanolon-tsaina ao amin'ireo kaominina ireo satria tsy mety ho amin'ny rafitry ny kaominina iray ny tsy fisiana mpanolon-tsaina, raha ny fanazavana teo anivon'ny Ceni. Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena no nisy fifidianana toa izany, ny kandidà indray no tsy misy.
Hanomboka anio alatsinainy ny fampidirana ny naotin’ny mpiadina BEPC ao anaty solosaina, arahin’ny fanamarinana. Any amin’ny faran’ny herinandro ambony any no hivoaka ny voka-panadinana BEPC ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra